News - Mawduuca Shiinaha ee 'Zodiac Theme Squishy Gel Pen' iyo Buug xusuus-qor ah Waxaa soo dhaweynaya Macaamiisha Shiinaha iyo Shisheeye
Shirkaddeenu waxay leedahay laba iyo toban mawduuc xayawaanno xayawaan ah oo china ah iyo buug yar, oo ay abuureen naqshadeeyayaal badan, fikradaha wax soo saarkeenna waxaa ku dhiirrigeliya sheekooyinka bey'adeed ee Shiinaha ee dhaqanka Shiinaha. Zodiac-ka Shiinaha waa astaanta loo yaqaan 'Zodiac' ee u dhiganta laba iyo tobanka laamood ee dhulka sannadka uu qofku ku dhashay. Waxaa ka mid ah jiir, dibi, shabeel, bakayle, masduulaagii, mas, faras, adhi, daanyeer, diiq, ey, iyo doofaar.
Sheekada Tartanka Cirka ee Jannada - Sababaha loogu talagalay Qiimeynta Zodiac
Waqti dheer, waqti hore, ma jirin wax ka hadlaya Shiinaha. Boqorka Jade wuxuu rabay inuu xusho 12 neef oo ilaaladiisa ah. Wuxuu u diray noole aan dhiman karin dunida bini'aadamka si uu u faafiyo farriinta ah in tii hore ay soo martay Albaabka Cirka, kan ugu fiicnaanaya darajada mid uu yeelan lahaa.
Khatarta Hore: Jiirka Degdega ah iyo Firfircoonaanta Ox
Maalintii ku xigtay, xayawaanku waxay aadeen dhanka Iridda Cirka. Jiir goor hore buu kacay. Markuu iridda u sii socdo, wuxuu la kulmay webi. Waxay ahayd inuu halkaa ku joojiyo, sababo la xiriira xawaaraha socda. Muddo badan markii uu sugayey, Jiirku wuxuu ogaaday Ox oo ku sii jeedda wabiga si dhakhso leh ayuu ugu booday dhegta Ox.
Tartan iyo Degdeg: Tiger iyo Bakayle
Tiger iyo Bakayle ayaa galay kaalinta seddexaad iyo afaraad maxaa yeelay labaduba waa deg deg oo waa loolan, laakiin Tiger ayaa ka dheereeyay. (Bakayle wuxuu ka gudbay wabiga asagoo ku boodaya dhagxaanta jaranjarooyinka iyo geed sabeynaya.
Masduulaagii Fiicnaa Iyo Maskii Khiyaanada Ahaa
Dragon-muuqaal wanaagsan ayaa ahaa shanaad waxaana isla markiiba ogaaday Jade Emperor, oo sheegay in wiilka Dragon uu noqon karo lixaad. Laakiin ina Dragon ma uusan raacin isaga maalintaas. Isla markaa, Mas ayaa soo baxay oo yidhi Dragon wuxuu ahaa aabihiis soo korsaday; sidaa darteed Masku wuxuu galay kaalinta lixaad.
Faras Naxariis leh oo dhexdhexaad ah iyo Ri
Faras iyo Ri ayaa yimid. Waxay ahaayeen dad naxariis badan oo xishood badan mid walbana kan kale ha iska sii daayo marka hore. Jade Emperor wuxuu arkay sida ay u anshax wanaagsan yihiin wuxuuna u kala qiimeeyay toddobaad iyo sideedaad.
Daanyeer sifiican ayuu hoos ugu dhacay. Laakiin wuxuu ku booday geedaha iyo dhagaxyada dhexdooda, oo wuxuu qabtay inuu noqdo kii sagaalaad. Ugu dambayn waxay ahaayeen diiq, Ey, iyo Doofaar.
12-kaas xayawaan waxay noqdeen ilaalada Albaabka Cirka.
Waxyaabaha mawduuca ah ee loo yaqaan 'zodiac Chinese', waxay codsadeen alaabooyin patent qaran ah. Tan iyo markii la galiyay suuqa, waxaa soo dhoweeyay macaamiil aad u tiro badan. Waxaan haynaa kumanaan qaybood oo alaab ah oo laga iibiyo adduunka oo idil.